शिदार्थ शुक्लाको निधनले विछिप्त बनेकी शहनाज कहिले फर्किन्छिन काममा ? दिलजितसंग सुरु गरेकी थिइन् काम – Sunaulo Nepal TV
एजेन्सी । प्रसिद्ध गायक र अभिनेत्री शहनाज गिल र दिलजीत दोसांझको जोडीले एउटा कामको अन्तिम तयारी गर्दै थिए । उनीहरुको जोडीलाई सबैले मन पराएका थिए । उनीहरुले अभिनय रहेको पंजाबी फिल्म ‘हौंसला राख’ यस बर्षको सबैभन्दा प्रतिक्षित फिल्म मध्ये एक हो। शहनाज र दिलजीत दोसांझ यस फिल्म को लागी काम शुरू गर्न को लागी तयारी अवस्थामा थिए। तर यो हुन सकेन, किनकि सिद्धार्थ शुक्लाको मृत्यु पछि शहनाज गहिरो शोकमा छिन् र उनी कसैसंग धेरै कुरा गर्दिनन्।
शहनाज कहिले काममा फर्किन्छिन् ?
फिल्मका निर्माताहरुले भर्खरै शहनाज र दिलजीत को फिल्मको बारेमा अपडेट साझा गरेका छन्। निर्माताले यो पनि बताए कि उनीहरु पहिले १५ सेप्टेम्बर मा एक प्रचार गीतको छायांकन गर्ने योजना बनाएका थिए। उनले यो स्थगित गर्नुपर्‍यो, किनकि शहनाज काम गर्ने स्थितिमा छैनन्।
भारतीय मिडियासँग कुरा गर्दै निर्माताले भने, ‘हामी शहनाज निको हुने र यो ठूलो दुख बाट बाहिर आउने समयको पर्खाइमा छौं। हामीले यस अघि फिल्मको गीत १५ सेप्टेम्बर मा लन्डनमा छायाँकन गर्ने योजना बनाएका थियौं, तर त्यस्तो हुन सकेन । हामी चाँडै नै नयाँ मिति तय गर्ने छौं र शहनाजलाई यो प्रोजेक्टको एक हिस्सा बनाउन चाहन्छौं । किनकि उनी फिल्म को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। म उनको प्रबन्धकसंग निरन्तर सम्पर्कमा छु र आशा छ कि उनी हामी संग सामेल हुनेछन्।’
परिवार, प्रशंसक र कलाकार शहनाजको बारेमा चिन्तित
सिद्धार्थ शुक्लाको मृत्यु पछि शहनाज कसैको अगाडि आएकी छैनन्। शहनाजलाई भेटेपछि धेरै कलाकारहरुले उनको खराब अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएका छन्। कलाकार देखि फ्यानहरु सम्म, शहनाज लाई बलियो रहन भन्दै सुझाव दिएका छन् । सबैजना चाहन्छन् कि मुस्कुराएर आफ्ना प्रशंसकहरुको मुटुमा शासन गर्ने शहनाज चाँडै नै यो कठिन समय बाट बाहिर आउन्।
Previous खड्ग बहादुरले क्यामेरालाई झुक्याउन खोजे, प्र’हरीलाई सकेनन , जसले ६ जना को ज्यान लिए
Next जसले विदेशबाट डलर पठाउछ उसैलाई एयरपोर्टमा सास्ती किन ? : अर्थमन्त्री शर्मा